Tia ny namana tahaka ny tenantsika
"Tiava ny namanao tahaka ny tenanao." - Mat. 22:39
Takin'ny lalàn'Andriamanitra ny hitiavantsika an'Andriamanitra ambonin'ny zava-drehetra, sy ny hitiavantsika ny namantsika tahaka ny tenantsika. Ho tsapan'ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy azony atao ny hitahiry na dia singam-pitiavan-tena kely monja aza. Tsy azony atao ny sady hanao ny asan'Andriamanitra no hampahory ny mpiara-belona aminy. Ny foto-kevitra faharoan'ny lalàna dia mitovy amin'ny voalohany ihany: "Tiava ny namanao tahaka ny tenanao". "Ataovy izany, dia ho velona ianao". Izany no teny nataon'i Jesôsy, izay tsy azo ihodiviran'ny lehilahy sy vehivavy ary ny tanora rehetra maniry ny ho tena Kristianina marina. Ny fankatoavana ny foto-kevitry ny lalàn'Andriamanitra no mamolavola ny toetra hanahaka ny an'Andriamanitra (... )
Ny mamela fotsiny amin'izao ny mpiara-belona izay ianjadiam-pahoriana dia fanoherana ny lalàn'Andriamanitra (...) Izay tia an'Andriamanitra dia tsy ho tia ny mpiara-belona aminy fotsiny, fa hanana fangoraham-po ho an'ireo voary izay noharian'Andriamanitra. Rehefa mitoetra ao amin'ny olona ny Fanahin'Andriamanitra, dia hotarihiny hanampy ny hafa izy, fa tsy sanatria hampahory ny hafa. (...) Adidintsika ny manamaivana ny fahoriana rehetra, sy ny hahatsapa fa irahin'Andriamanitra isika mba hanamaivana ny fahorian'ny hafa amin'ny herintsika rehetra. Nantsoina ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Misy ireo olona izay maneho fitiavana be ho an'ny olona mifanerasera aminy, ho an'ny namany sy ny olona akaiky azy, kanefa tsy misahirana ary tsy miraharaha ireo izay mila fangorahana sy hatsaram-panahy ary fitiavana. Aoka hiredareda ao am-pontsika ny fahalianana hamaly ny fanontaniana hoe: Iza no rahalahiko? Ny rahalahintsika dia tsy ny mpifanolo-bodirindrina sy ny namantsika manokana ihany, ary tsy ny mpiara-mivavaka amintsika na izay mitovy fomba fihevitra amintsika ihany. Ny rahalahintsika dia ny fianakaviamben'ny taranak'olombelona manontolo. Adidintsika ny maneho amin'izao tontolo izao ny hevitry ny atao hoe manatanteraka ny lalàn'Andriamanitra. Nantsoina isika mba ho tia an'Andriamanitra ambonin'ny zava-drehetra, sy ho tia ny namantsika tahaka ny tenantsika. — Ms, 33 .